LEGO 71030 Looney Tunes Collectible Minifigures သေတ္တာဖြန့်ဖြူးသည်
LEGO 71030 Looney သည်စုဆောင်းနိုင်သောအသေးစားပုံသေတ္တာများဖြန့်ဝေသည်
11 / 04 / 2021 11 / 04 / 2021 ရော့ Paton 1575 Views စာ0မှတ်ချက် 71030 Looney Tunes Collectible အသေးစား, Lego, LEGO Collectible Minifigures box ဖြန့်ဖြူး, Lego Looney Tunes, Lego Minifigures
အက္ခရာတစ်လုံးချင်းစီ၏ပြည့်စုံသောအကွက်ထဲတွင်မည်မျှပါဝင်သည်ကိုရှာဖွေပါ Lego 71030 Looney တီးလုံး စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဘယ်မှာ box ထဲမှာသူတို့ဖြစ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးပေါ်စီးရီးများတွင်စုဆောင်းရန် Looney Tunes ဇာတ်ကောင် 12 ရှိပါတယ် Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစားကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်သည်။
toon တစ်ခုချင်းစီသည်စတိုးဆိုင်၌ခံစားရရန်လွယ်ကူသော်လည်းသင်မထိရသေးသောပြည့်စုံသောအကွက် ၃၆ ကိုတွေ့ရန်အခွင့်အရေးရှိပါကအောက်ပါအပြင်အဆင်များသည်အသေးစားရုပ်ပုံ၏သီးခြားဖြန့်ဖြူးခြင်းအတွက်အသုံးဝင်သောလမ်းညွှန်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံးကြောင်း 36 ၏ပြည့်စုံ box ၏ဤမှတ်ချက်တွေပုံရိပ်ဖြစ်ပါတယ် Brick Fanatics သူတို့ရရှိသည့်နေရာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဓာတ်ပုံပေါ်တွင်အက္ခရာတစ်ခုစီ၏နေရာကိုအမှတ်အသားပြုသည်။
imgur.com အပေါ်ကြည့်ရန် post ကို
နောက်ပုံတစ်ပုံမှာ Looney Tunes ၏ minifigure တစ်ခုချင်းစီကို၎င်းရောက်ရှိသည့်အချိန်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိသည်ကိုလည်းဖော်ပြထားသည် Brick Fanatics, ဘယ်ဘက်ကော်လံ box ရဲ့ဘယ်ဘက်ခြမ်းကိုကိုယ်စားပြုနှင့်ညာဘက်ကော်လံညာဘက်ခြမ်းကိုကိုယ်စားပြုအတူ။ စားပွဲ၏ထိပ်တန်းသည် box ၏နောက်ကျောဖြစ်ပြီးအောက်ခြေသည် box တစ်ခု၏ရှေ့ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ထို့ကြောင့်ဥပမာအားဖြင့်၊ အောက်ပါကိုလမ်းညွှန်အဖြစ်အသုံးပြုပြီးမာဗင်န M ဖြစ်သည်artian သည်သေတ္တာ၏ဘယ်ဘက်နှင့်ညာဘက်နှစ်ဖက်လုံးတွင် box တစ်ခု၏အဝေးဆုံးသောနေရာတွင်ရှိသည်။ Road Runner သည်ဘယ်ဘက်ရှိ box တစ်ခု၏ရှေ့တွင်ထိုင်ပြီး Petunia Pig သည်ညာဘက်ရှိ box တစ်ခု၏ရှေ့တွင်ထိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါအသေးစိတ်မှတ်တမ်းတစ်ခုစီ၏ဤဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်အရေအတွက်သည်အနာဂတ်သေတ္တာများနှင့်ကွဲပြားနိုင်သည်ကို ကျေးဇူးပြု၍ သတိပြုပါ Lego Wile E. Coyote မှပျောက်နေသောကြောင့် Looney Tunes အသေးစားရုပ်ပုံများကိုဖော်ပြထားသည် Brick Fanatics'' ထုတ်လုပ်မှုအမှားကြောင့်ထောက်ပံ့ပေးသေတ္တာ။ ထိုအမှားသည်လက်လီရောင်းချရန်ထွက်နေသောသေတ္တာတိုင်းကိုအကျိုးသက်ရောက်ပုံမပေါ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းမှအတည်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းနေပါသည် Lego အုပ်စု။ Wile E. ၏ရာထူးသည် Road Runner အစက်အပြောက် (၆) ခုအနက် (၃) နေရာတွင်ရှိသည်ဟုယူဆရသည်။
နောက်ကျော box ရဲ့ဘယ်ဘက် box ရဲ့နောက်ကျော
Lola ယုန် Lola ယုန်
Tasmanian Devil အမ်ဗင်artIan
မြန်ဆန် Gonzales Lola ယုန်
မြန်ဆန် Gonzales မြန်ဆန် Gonzales
Tasmanian Devil Tasmanian Devil
Daffy ဘဲ Tweety
bugs Bunny ကြောင် Sylvester
The Runner / Wile အီးဝံပုလှေ ဝက်ဝက်
The Runner / Wile အီးဝံပုလှေ ဝက် petunia
box ရဲ့ရှေ့ဘယ်ဘက် box ရဲ့ရှေ့ညာ
သင်မြင်သည်အတိုင်း, အသေးစားရုပ်ပုံသုံးခုစီ၏ပြည့်စုံ box ထဲမှာရှိပါတယ် Lego Looney Tune စုဆောင်းထားသောအသေးစားမှလွဲ။ - အ p ၌တည်၏artထံသို့ပို့ icular box ကို Brick Fanatics - ထုတ်လုပ်မှုအမှားကြောင့်လမ်းဘေးပြေးသူ ၆ အုပ်နှင့် Wile E. Coyote မိတ္တူမရှိပါ။ ဤအရာကိုပြင်ဆင်သည့်အခါဤအက္ခရာသုံးခုစီရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်၎င်းတို့အကြားရှိအကွက်၏ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိပထမ ဦး ဆုံးရာထူးခြောက်ခုကိုရရှိလိမ့်မည်။
ဤ Lego Minifigures စီးရီးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် feature ကိုရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည် Lego Group မှ။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောအလုပ်ကိုထောက်ပံ့ပါ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းအားဖြင့် Lego ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ - ကျေးဇူးတင်ပါသည်!
← LEGO 71030 Looney Tunes ၏စုဆောင်းထားသော Minifigures review - update လုပ်!
LEGO Looney Tunes Collectible Minifigures ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်နမူနာများတွင်အဓိကဇာတ်ကောင်တစ် ဦး ပျောက်ဆုံးနေသည် →